Beesha Caalamka oo soo dhaweysay asixinta golaha Wasiirada ee Soomaaliya – Radio Muqdisho
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur goboleedka IGAD iyo dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa soo dhoweeyay ansixinta golaha Wasiirada ee cusub oo maalintii shalay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen golaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Beesha caalamka waxaa ay Madaxweynaha Soomaaliya, Ra’iisul wasaaraha dalka iyo Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya ku booriyeen in ay ku dadaalaan dhameystirka qorshiyaasha 201ka.
“waxaan soo dhaweynaynaa asixinta golaha Wasiirada ee cusub, waxaana madaxda hay’adaha Soomaaliya ugu baaqaynaa in ay si wadajir ah u shaqeeyaan si loo gaaro qorshaha la hiigsanaayo ee 2016-ka hadda waxaa la joogaan waqtigii la ilaalin lahaa midnimada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliy” ayaa lagu sheegay warsaxaafadeed si wadajir ah u soo saareen Wadamada iyo hay’adaha kor ku xusan.
” waxaana sidoo kale ku baaqaynaa in la kordhiyo ka qeybgalinta siyaasadda iyo hanaanka socoda gabdhaha, dhallinyarada iyo dadka laga tiro badan yahay waxay taasi qeyb ka tahay waxyaabaha keeni kara in Soomaaliya ay horey u socoto” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Sanadka 2015-ka waa sanad aad u muhiimsan waxaana la doonayaa in la xoojiyo howlgalada lagu adkeynaayo amniga dalka isla markaana la raadiyo wadadii Soomaaliya ku heli laheyd nabadgeliyo iyo xasilooni buuxda.
Beesha caalamka waxaa ay sidoo kale cambaareeyeen dilkii maalintii shalay kooxda Al-shabaab u geysteen Allaha u naxriistee Xildhibaan Cabdullaahi Qayaad Barre oo ka tirsanaa mudaneyaasha Baarlamaanka Soomaaliya iyagoo hay’adaha amaanka Soomaaliya ka dalbaday in ay cadaaladda hor keenaan dambiilyaasha ka dambeeyay dilkaasi.